IATA waxay taageertaa Shahaadada COVID Digital ee Yurub oo ah heer caalami
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » IATA waxay taageertaa Shahaadada COVID Digital ee Yurub oo ah heer caalami
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
DCC waxaa la gaarsiiyay waqtigii diiwaangelinta si ay gacan uga geysato fududeynta dib -u -furista dowladaha Midowga Yurub si ay u safraan. Maqnaanshaha hal halbeeg caalami ah oo loogu talagalay shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah, waa inay u noqotaa qorshe umadaha kale ee raadinaya inay hirgeliyaan shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah si ay gacan uga geystaan ​​fududeynta safarka iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee la xiriira.
EU Digital COVID Certificate waxay leedahay dabacsanaan loo adeegsan karo warqad iyo qaab dijitaal labadaba.
Summada QR ee Shahaadada COVID Digital EU waxaa lagu dari karaa qaab dijitaal iyo warqad ah.
Shahaadada COVID Digital ee EU waxaa laga hirgaliyay 27 -ka dal ee xubnaha ka ah EU.
Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA) wuxuu ku ammaanay Komishanka Yurub hoggaankiisa iyo xawaaraha uu gaarsiiyay Shahaadada EU Digital COVID Certificate (DCC) wuxuuna ku boorriyay dowladaha inay ka dhigaan halbeegooda caalamiga ah ee shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah.
Conrad Clifford, Ku -xigeenka Agaasimaha Guud ee IATA
“DCC waxaa la keenay waqtigii diiwaangelinta si ay gacan uga geysato fududeynta dib -u -furista dowladaha Midowga Yurub si ay u safraan. Maqnaanshaha hal halbeeg oo caalami ah oo loogu talagalay shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah, waa inay u noqotaa qorshe umaddo kale oo raadinaya inay hirgeliyaan shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah si ay gacan uga geystaan ​​fududeynta safarka iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee la xiriira, ”ayuu yiri Conrad Clifford, IATAKu -xigeenka Agaasimaha Guud.
EU DCC waxay buuxisay dhowr shuruudood oo muhiim ah kuwaas oo loo aqoonsaday inay muhiim yihiin haddii shahaadada tallaalka dhijitaalka ah ay noqoto mid wax ku ool ah:
format: DCC waxay leedahay dabacsanaan loo adeegsan karo warqad iyo qaab dijitaal ah.
QR code: Koodhka DCC QR waxaa lagu dari karaa qaab dijitaal iyo warqad ah. Waxaa ku jira macluumaad muhiim ah iyo sidoo kale saxiix dijital ah si loo hubiyo in shahaadada ay dhab tahay.
Xaqiijinta iyo xaqiijinta: The Guddiga Yurub wuxuu dhisay albaab laga soo galo kaas oo xogta qarsoon ee loo adeegsaday in lagu saxeexo DCC -yada loona baahan yahay xaqiijinta saxiixyada shahaadooyinka waxaa lagu qaybin karaa EU -da oo dhan. Albaabka ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu qaybiyo xogta qarsoon ee bixiyayaasha shahaadooyinka aan ahayn Midowga Yurub ee bixiyayaasha kale. Midowga Yurub wuxuu kaloo soo saaray sharraxaad ku saabsan mashiinnada la akhrin karo Xeerarka Xaqiijinta ee socdaalka waddanka gudihiisa.
EU DCC waxaa laga hirgeliyay 27 -ka dal ee xubnaha ka ah Midowga Yurub waxaana heshiisyo dhowr ah oo is -dhaafsi ah lala galay shahaadooyinka tallaalka ee dowladaha kale, oo ay ku jiraan Switzerland, Turkey, iyo Ukraine. Maqnaanshaha hal heer caalami ah oo loogu talagalay shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah, illaa 60 waddan oo kale ayaa raadinaya inay u adeegsadaan tilmaanta DCC shahaadadooda. DCC waa qaab aad u fiican maadaama ay la jaanqaadayso Tilmaan -bixintii ugu dambeysay ee Ururka Caafimaadka Adduunka waxaana si buuxda u taageera IATA Travel Pass. Faa'iidada kale ee DCC ayaa ah inay u saamaxdo dadka haysta inay galaan goobaha aan duulista lahayn ee Yurub ee u baahan caddaynta tallaalka, sida matxafyada, dhacdooyinka isboortiga iyo riwaayadaha.
IATA waxay rabtaa inay wadashaqaynteeda u fidiso Komishanka Midowga Yurub iyo dawlad kasta oo kale oo danaynaysa si loogu sii daro DCC hababka diyaaradda si loo helo khibrad rakaab oo sugan oo aan xuduud lahayn, sida taageeridda shaacinta xogta shakhsiga.